Ubulawe eyongcwaba uninazala owaKwaDukuza | Eyethu News
Ubulawe eyongcwaba uninazala owaKwaDukuza
“Ubephuma ukuyokhipha imali ebhange elungiselela umngcwabo.”
Usashaqekile umphakathi waKwaDukuza kulandela ukubulawa ngesihluku kowesifazane esehlakalweni sokubamba inkunzi kuhlonyiwe, izolo ngoLwesine.
Kulesi sehlakalo esenzeke ngezithuba zasemini, imibiko yamaphoyisa ithi umufi ubeqhamuka ukuyokhipha imali kwelinye lamabhange asenkabeni yedolobha laKwaDukuza, ngesikhathi epaka imoto yakhe yohlobo lwe-VW Touran, emgwaqeni uKing Shaka Street, ukuze ayokhokhela imali yomngcwabo kwenye yezinkampani zomasingcwabisane.
Imibiko ithi kuthe ngesikhathi lona wesifazane ethi uyehla emotweni yakhe wahlaselwa ngabesilisa ababili, nabafune yonke imali abeyiphethe. Abazibonele ngamehlo bathi kuthe kusenjalo abahlaseli laba bavulela ngenhlamvu izikhathi eziningana, kwadubuleka lona wesifazane washonela khona lapho. Kulesi sehlakalo kubuye kwalimala nomunye wesilisa obezidlulela.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Thulani Zwane uthe amaphoyisa avule icala lokubulala kanye nelokuzama ukubulala, kanti okwamanje bekungakaboshwa muntu.
Kanti lowo okhulumela amaphoyisa esiteshini samaphoyisa KwaDukuza, uWarrant Officer Johannes Khoza, yena unxuse amalunga omphakathi angase abe nolwazi mayelana nalesi sehlakalo ukuthi athintane namaphoyisa aKwaDukuza kule nombolo yocingo: (032) 551-8200, noma ashayele inombolo yeCrime Stop ethi (08600) 10111. Uphenyo lusaqhubeka.
Kwezinye isehlakalo, amaphoyisa aKwaDukuza abophe owesilisa oneminyaka engu-26 endaweni yaseThembeni ngemuva kokuthi etholakale nesibhamu esingekho emthethweni sohlobo lwe-7.65mm kanenezinhlamvu. Umsolwa ubuye watholakala nensangu kanye nezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine, kanti ngokusho kuka-Warrant Officer Khoza, amaphoyisa abegasele endlini yalo mlisa ngoba efunelwa icala lokubulala kanye nelokuzama ukubulala.
Umsolwa, nokunguMnuz Thulasizwe Mhlongo uye wavela kafushane enkantolo yemantshi KwaDukuza kulo leli viki, kanti kulindeleke ukuthi aphinde avele futhi enkantolo,khona maduze nje.
Awasebenzanga amabhasi akwa-SMT ngomsindo osuswe yimali yokugibela